बिहिबार, कात्तिक ६, २०७७ Sarangi Radio Network
साहित्य शृङ्खलामा पुडासैनीको ` मलामी भट्टि´ लोकार्पण
सोमबार, साउन १२, २०७७ सारङ्गी न्युज
बागलुङ l छ्याप छ्याप्ति तीजगीत सार्वजानिक भएका छन् । काेराेना महामारीका विचमा पनि कलाकारलाई गीत सार्वजानिक गर्न भ्याई नभ्याई छ ।
नेपाली माैलिकतालाई बिर्सेर तीजका गीतमा छाडापन ल्याएकाे भन्दै सामाजिक सञ्जालमा केही आलाेचना भईरहेका छन तर नारीका बेदना मात्रै हाेइन् चेतना र साहसका प्रयासहरुलाई तीजगीतमार्फत बुल्द भएका छन् । भर्खर मात्रामा बजारमा आएकाे लाेक दाेहाेरी गायिका शान्त रानी परियारकाे तीजगीत आधिबाटाेले नेपाली माैलिकतालाई प्रवर्धन गरेकाे छ ।
नेपाली माैलिकतालाई टपक्कै टिपिएकाे यसगीतमा राताे र निलाे पहिरनमा नारीहरु सजिएकाे देखिन्छ । गीतले साच्चिकै आम दर्शाक श्राेताकाे मन जितेकाे छ । गीतमा माया प्रेमकाे भाबलाई जाेडिए पनि माया पाए सबै कुरा बिर्सने गायक गायिकाले भाबनात्मक नाता साटेका छन् ।
बहुचर्चित गायक खेम सेञ्चुरीकाे लय ,नेत्र अर्यालकाे शब्दमा रहेकाे यस गीतमा गायिका शान्ता रानी परियार र खेम सेञ्चुरीले स्वर भएका छन् । गीतमा चर्चित माेडल अन्जली अधिकारी र खेमकाे बबाल नृत्य देख्न सकिनछ ।
निकै फरक तरिकाले छाँयाङकन गरिएकाे भिडियाेकाे निर्देशन प्रकाश भट्ट,छाँयाङकन नबराज उप्रेती र सम्पादन बिष्णु शर्माले गरेका छन । गीतकाे म्युजिक भिडियाे पृथ्बी ईन्टरटेनमेन प्रालिकाे युटुब च्यानल बाट सार्वजानिक गरिएकाे छ ।
गीतकाे भिडियाे ।
सोमबार, साउन १२, २०७७, १९:३२:००
#तीजगीत #शान्तारानी #खेमसेन्चुरी
मंगलबार, भदौ २, २०७७ सारङ्गी न्युज
करापुटारमा परम्परागत प्रजातान्त्रिक साहित्य सम्मेलनको तयारी ४ घण्टा पहिले
सम्माननीय राष्ट्रपति महाेदय ! तपाईंकाे कुर्सीले मानवता पनि बिर्साइदिन्छ हाे ? बिहिबार, असोज १५, २०७७